ယောက်ျားလေး၏ရှပ်အင်္ကျီ s / s ကို GR-553
စတိုင်နံပါတ်: GR-553 အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 2-14A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းအ ၀ တ်အထည်အသုံးအဆောင်: Herringbone တိပ်၊ ပလတ်စတစ်ခလုတ်၊ နိုင်လွန်ဇစ်မှတ်ချက်။ ။ နေရာချထားပုံနှိပ်ခြင်း၊
ယောက်ျားလေး၏ရှပ်အင်္ကျီ s / s ကို GR-385
စတိုင်နံပါတ် .: GR-385 အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: ၆-၁၂A အထည်: ၁၀၀% ဝါဂွမ်းအ ၀ တ်အထည်အသုံးအဆောင်: တီးမှုတ်၊ တယောတံဆိပ်၊ D-shaped ပုံခလုတ်မှတ်စုများ - ပုံနှိပ်အားလုံး
ယောက်ျားလေး၏ရှပ်အင်္ကျီ s / s ကိုကို F-1148
စတိုင်နံပါတ် .: F-1148 အရောင်: အပြာရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex chambray ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်တိပ်၊ ပလပ်စတစ်ခလုတ်၊ D-shaped ခလုတ်မှတ်ချက်။ ။ ပုံနှိပ်၊
ယောက်ျားလေး၏ရှပ်အင်္ကျီ s / s ကိုကို F-1145
စတိုင်နံပါတ် .: F-1145 အရောင်: အဖြူရောင်အရွယ်အစား: ၆-၁၂A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex chambray ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်တိပ်၊ ပလတ်စတစ်ခလုတ်အသွင်အပြင် - gradient ပုံနှိပ်မှတ်ချက်မှတ်ချက် - ပန်းထိုးခြင်း၊ ပန်းထိုးခြင်း
ယောက်ျားလေး၏ရှပ်အင်္ကျီ s / s ကိုကို F-1144
စတိုင်နံပါတ် .: F-1144 အရောင်: အပြာရောင်အပြာရောင်အရွယ်အစား: ၆-၁၂A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex chambray ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်တိပ်၊ ပလပ်စတစ်ခလုတ်၊ D-shaped ပုံခလုတ်မှတ်ချက်များ - ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ပန်းထိုးခြင်း
ယောက်ျားလေး၏ရှပ်အင်္ကျီ s / s ကိုကို F-623
စတိုင်နံပါတ် .: F-623 အရောင်: အပြာရောင်အပြာရောင်အရွယ်အစား: ၆-၁၂A အထည်: အခွံ - ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex chambray ဆက်စပ်ပစ္စည်း - ရက်ကန်း၊ တိပ်၊ ပလပ်စတစ်ခလုတ်မှတ်ချက် - ပုံနှိပ်၊
ယောက်ျားလေး၏ရှပ်အင်္ကျီ s / s ကိုကို F-621
စတိုင်နံပါတ်: F-621 အရောင်: ဒုအစိမ်းရောင်အရွယ်အစား: ၆-၁၂A အထည်: ၉၅% ဝါဂွမ်း ၅% spandex chambray ဆက်စပ်ပစ္စည်း: ယက်တိပ်၊ ပလတ်စတစ်ခလုတ်အသွင်အပြင် - placket ပေါ်ဖြတ်ထားသောကော်နှင့်ချုပ်ထားသောမှတ်ချက်များမှတ်ချက်များ - နေရာချထားပုံနှိပ်ခြင်း၊
ကျပန်းရှပ်အင်္ကျီ / GR-497
ပုံမှန်ပွဲလမ်းသဘင်များ၊ အားလပ်ရက်အပန်းဖြေခရီးထွက်မည့်ဝတ်စုံများဖြစ်ဖြစ်ရှပ်အင်္ကျီအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ရှပ်အင်္ကျီများသည်အမြဲတမ်းကိုက်ညီရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အဘယ်အချိန်တွင်မည်သည့် ၀ တ်စုံနှင့် ၀ တ်ဆင်ရမည်နည်း။ လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောအထင်အမြင်ကိုပြသလိမ့်မည်။ ဤဝါဂွမ်းရှပ်အင်္ကျီသည်အသက်ရှူလွယ်သော၊ နူးညံ့ပျော့ပျောင်း။ သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ ဓာတ်မတည်။ ၎င်းသည်အတွင်းနှင့်အပြင်အကြားဝတ်ဆင်နိုင်သောထိပ်တန်းဖြစ်သည်။